» भ्रममा नपरौं-लसुन, बेसारले कोरोना रोक्दैन
भ्रममा नपरौं-लसुन, बेसारले कोरोना रोक्दैन
४ चैत्र २०७६, मंगलवार २०:५०
संगठनले मान्छेलाई भ्रम भएका केही मुख्य विषयबारे प्रस्ट्याएको पनि छ।
के लसुन खाँदा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ?
विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ- अहिलेसम्म लसुन खाँदा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न सकिने वा रोकथाम भएको कुनै तथ्य प्रमाणित छैन।
तेल मालिसले भाइरसलाई शरीरमा पस्न रोक्छ?
तेल मालिस गर्दा कोरोना भाइरस शरीरमा नछिर्ने भन्ने हुँदैन। तेलले कोरोना भाइरस मार्न पनि सक्दैन।
तातो पानी पिउँदा वा तातो पानीमा डुबुल्की मारेर नुहाउFले संक्रमणबाट जोगिइन्छ?
तातो पानी स्वास्थ्यका लागि राम्रो भए पनि यसले कोरोना संक्रमणबाट बचाउँदैन।
कोरोना भाइरस लामखुट्टेले टोक्दा सर्छ?
अहिलेसम्म लामखुट्टेले टोकेर कोरोना सरेको पुष्टि भएको छैन। यो श्वासप्रश्वासबाट सर्ने भाइरस हो। कोरोना भाइरस भएको मान्छेले खोक्दा र हाछ्यूँ गर्दा निस्कने थुक र सिँगानको माध्यमबाट सर्छ।
के हात सुकाउने मेसिन (ह्यान्ड ड्रायर) कोरोना भाइरस मार्न प्रभावकारी हुन्छ?
हात सुकाउने मेसिन कोरोना भाइरस मार्न प्रभावकारी हुँदैन। कोरोना संक्रमणबाट बच्न बेला-बेला साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। वा अल्कोहलयुक्त स्यानिटाइजर दल्नुपर्छ। हात सुकाउन कागजको रुमाल वा हात सुकाउने ड्रायर प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबैजनाले एउटै रुमाल भने प्रयोग गर्नु हुँदैन।
जीउमा अल्कोहल (रक्सी) वा केही रसायन दल्दा वा छर्किँदा कोरोना भाइरस मर्छ?
शरीरभित्र कोरोना भाइरस प्रवेश गरिसकेपछि यसलाई अल्कोहल वा रसायनले मार्दैन। बरू यसरी दल्दा वा छर्किँदा तपाईंको लुगा वा शरीरमा हानी पुग्न सक्छ।
रक्सी पिउँदा, चुरोट खाँदा कोरोना संक्रमण हुँदैन?
रक्सी वा चुरोटले कोरोना संक्रमणबाट जोगाउँदैन।
बेसार, बोझो, लसुन खाए कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ?
लसुन, बोझो र बेसार स्वास्थ्यका लागि राम्रो भए पनि हालसम्म यसले कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित भएको तथ्य फेला नपरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन बताउँछ।
योबाहेक गहुँत, कागती पानी, अधिक पिरो, मसालेदार खाना खाँदा पनि कोरोना संक्रमणबाट बचिन्छ भन्ने सोच फैलिएको छ। तर यी केहीको पनि प्रमाण छैन। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न यो खाने- त्यो खाने भन्ने पुष्टि भएकै छैन।
संक्रमित मान्छेबाट टाढा रहनु र जोगिएर हिँड्नु नै एक मात्र उपाय हो। त्यस्तै आजका दिनसम्म कोरोना भाइरसको औषधि पनि पत्ता लागिसकेको छैन।